मैले भाडा दिन नसक्दा राती बाउले दिउसो छोराले : काठमाडौंको गोंगबुमा बस्ने एउटी कलेज पढ्ने युवतीको बास्तिबक कथा .::आर एम खबर
मैले भाडा दिन नसक्दा राती बाउले दिउसो छोराले : काठमाडौंको गोंगबुमा बस्ने एउटी कलेज पढ्ने युवतीको बास्तिबक कथा .
यी कथा तथा बिषयवस्तु कल्पनिक हुन् , कुनै पेसा , मान्छे , धर्म , समन्धलाई असर पुराउन लेखिएको होइन । अनी कुनै ठाउँ , वर्ग , जाती लाई हानी पुराउन खोजिएको पनि हैन । कसैको जिन्दगीमा मेल खान गए मात्र सम्योग हुनेछ । यदी कसैलाई चोट पर्न गएमा माफ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ। अनी यो वेबसाईट मा भएका सम्पूर्ण कथा हरु १८ बर्ष भन्दा माथिका दर्सक हरुको लागि मात्र हो । त्यो भन्दा कम उमेर हुने हरुले कृपया नहेरिदिनु होला । साथै अरु धेरै कथा पढ्न हाम्रो वेबसाईट आफ्नो कम्प्युटर बाट हेर्न सक्नु हुनेछ र मोबाईल बाट गरेर अर्को कथा पढ्न सकिने छ । कसैसँग यस्तै कथा भएमामा दिन सक्नु हुनेछ। कथा दिदा पात्रको नाम परिवर्तन गरेर दिनुहोला ।
साथै योन कथा लेखेर घर बसी बसी महिना को ३० हजार कमाउन चाहनु हुन्छ भनी हामीलाई संपर्क गर्नुहोस् । तपाईंले मेरो पेज या हाम्रो ईमेल मा पनि संपर्क गर्न सक्नु हुन्छ । कथाका बिषयवस्तु हरु कल्पनिक हुनुपर्ने छ साथै कथा नेपाली फन्ट मा हुनु पर्नेछ । कम्तिमा पनि ५०० शब्द अनिवार्य हुनु पर्नेछ । कुनै पनि वर्ग, धर्म तथा जातीलाई कथाको बिषयवस्तुले असर गर्नु हुँदैन । दिन मा कम्तिमा ५ वटा कथा लेख्नु पर्नेछ । जती धेरै कथा लेख्न सकियो त्यती धेरै तलबको बेवस्ता गरिएको छ । दिन को एउटा कथा पनि पठाउन सकिन्छ । एउटा कथालाई कम्तीमा १०० रुपैयाँ दिइने छ । कथा कुनै पनि वेबसाईट बाट कपि गरेको हुनु हुँदैन । कपि गरिएको कथा बाट हामीलाई कुनै पनि आम्दानी हुँदैन । त्यसैले कथा लेख्दा आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्नुहोला । जस्ले काम गर्न चाहनु हुन्छ कृपया एउटा आफ्नो कथा शाहीत फोन नम्बर मेल गर्नुहोला । हामीले कथाको बिषय वस्तु हेरेर तपाईंलाई संपर्क गर्ने छौ ।
य…बा..’ म कराएँ । चाकको प्वालमा उसको टुप्पोमात्र पसेको थियो सले हात सार्न थाल्यो, मेरा स्तनतिर ल्याउन । मैले आफ्ना दुबैस्तनलाई हत्केलाले ढाकेँ । उसले मेरा दुबै हात आफ्नो दाहिनेहातले समात्यो र मेरा स्तनमाथि मुख दल्यो, मानौं त्यो कुनै माटोको
ढिस्को हो, त्यसलाई ऊ मुख दलेरै भत्काउन चाहन्छ । उसकोमुहारको घर्षणले मलाई दुखाइरहेको थियो, तर पनि म सहन बाध्यथिए । एक पटक त उसले आफ्नो दाँतले मेरो देब्रे स्तन टोक्यो मैले ‘ऐया’ भनेँ । उसले ढाडस पार्दै भन्यो दुख्यो, ? ‘अँ’ मेरो जवाफ
अनि उसले मेरो स्तन मुसार्दै भन्यो, ‘सरी है ।’ मकेही बोलिनँ । अनि ऊ आफ्नो लुगा खोल्न थाल्यो ।सर्ट, पाइन्ट, गन्जी हुँदै उसले पेन्टी पनिखोल्यो । म उसको त्यो यौन प्यासलाई घृणाका नजरलेनियाँलीरहेकी थिएँ । त्यसपछि मेरो छेवैमाआएर ऊ बस्यो । अनि मेरो दाहिने हात आफ्नो लाडोमा लगेर राखिदियो। सायद ऊ मैले लाडो खेलाइदियोस् भन्ने चाहिरहेको थियो । तर मैलेत्यहाँबाट हात झिकेँ । उसले फेरि त्यहीँ मेरो हात
लग्यो र भन्यो, ‘किन डराएकी ? अस्ति कै दिन सिलतोडिएको होइन र ? अब के को लाज ?’ उसले फकाउँदै भन्यो, ‘अबत फ्री भएर रमाइलो गर्नुपर्छ । यस्तो कुरामा लाज मानेरमजा लिन सकिदैंन । आउ… ।’‘मलाई मजा चाहिएको छैन ,’ मेरो जवाफ थियो । ‘ओहोतिमी त जहिल्यै पनि भर्जिन कै जस्तो कुरा गर्र्छौ बा ।’उसले यति नभन्दै मलाई खाटमा पल्टायो । अनि ममाथि मडारिन थाल्यो ।मेरा खुट्टालाई आफ्ना खुट्टाले बाँधेर मलाई बेस्सरीथिचिरहेको थियो । मेरा स्तनमा घरीघरी हात
ल्याउँथ्यो र निचोर्थ्यो । अचानक ऊ घुँडा टेकेर बस्यो । अनि मलाईएक नजरले हेर्यो । ऊ जोशले जागिसकेको राक्षस जस्तो भइसकेकोथियो । उसको अनुहार रातो भइसकेको थियो । फटाफट उसले मेरा लुगाखोल्दै भुइँतिर फाल्न थाल्यो । मलाई नांगो बनाउन उसलाई एक मिनेटपनि लागेन होला ।अनि मेरो खुट्टा फट्याएर पुती नियाँल्न थाल्यो । हातलेकेही बेर चलायो । मलाई काउकुती लाग्यो हत्केलाले पुती निकैबेर रगड्यो । कहिले भुत्लाचलाउने, कहिले पुतीको डिलमा औला दल्ने, कहिले औंलापसाउन खोज्ने गर्दै निकैबेर उसले खेलायो । म आँखा चिम्लिएर उसकास्मर्शलाई स्वीकार्दै गएँ । एकछिन ऊ शान्त भएझैलाग्यो । तर मैले आँखा खोलिनँ । केहीबेरमा उसले मेरादुबै हात समात्यो । त्यतिन्जेल मेरो ओठतिर उसले लाडोल्याइपुर्याइसकेको रहेछ । मैले आँखा खोलेँ । लमतन्न उसको लाडोपसारिएको थियो । अनि उसले मेरो ओठमा दल्न थाल्यो । मलाई घिनलाग्यो र मुन्टो अर्कातिर फर्काएँ । मेरो चिउँडो समातेर उसले लाडो दल्नथाल्यो । ‘यो के गरेको ?’ मैले भनेँ । ‘यसलाई माया गर नलाटी ।’ उसले छिल्लीदैं भन्यो । ‘
यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने सोचेकी पनि थिइनँ, मलाईछोड्दिनुस्,’ मैले भनेँ । तर ऊ किन मान्थ्यो । मेरा स्तनलाई लाडोले
घोच्न थाल्यो । मलाई यताउता पल्टाउँदै जिउभरी लाडो दल्यो। मलाई सिकसिको लागिरहेको थियो । एक दुइ पटक त मैले हातलेसमातेरै उसको लाडो हटाउने प्रयास पनि गरेँ । तर एकतिरबाट हटाउननपाउँदै उसले अर्कोतिर दल्न भ्याइसकेको हुन्थ्यो । निकैबेर यो क्रमचल्यो । म हैरान हुँदै गएँ । उसले मलाई जुरुक्क उठायो र काखमाराख्यो ।
उसको लाडोमाथि मेरो चाक परेको थियो । लाडो जुर्मुराएको स्पष्टअनुभव मैले गरिरहेकी थिएँ । ऊ चाहीँ मेरोकाखीमुनीबाट हात छिराएर मेरा दुबै स्तनच्याप्प समातेर बसेको थियो । स्तनको मुन्टो खेलाउँदा मलाई खुबकाउकुती लाग्थ्यो । उसले आफ्नो छातीमा मेरोढाड टाँसेको थियो । मैले उसको शरीरको ताप महसुस गरेँ। अचानक मलाई घोप्टो पार्यो । अनि मेरो शरीरमा ऊ लम्पसार भयो । चाकको चेपमा उसले लाडो दल्न सुरु गर्यो । मरो जिउनै सिरिंग भयो । यत्तिकैमा मेरो चाक फट्याएर उसले नियाँल्यो । अनि प्वालमा मुखभरीको थुक खसाल्यो ।
अनि आफ्नो औंलालेचलाउन सुरु गर्यो । म डराएँ । यो पागलबाट कसरीछुट्कारा पाउने भन्ने चिन्ताले छट्पटाएँ । उसले एउटा औंला मेरो चाकमाबिस्तारै पसाउन खाज्यो । मलाई असजिलो भयो र उठ्न खोजेँ । तरमलाई ठेलेर उसले उठ्न दिएन । अनि चाकमा लाडो अड्यायो । ऊ धक्कालगाउन खोजिरहेको थियो । तर मैले चाक बंग्याएर छलेँ । त्यसपछि ऊमेरो त्रि्रा चेपेर टुक्रुक्क बस्यो । अनि लाडो फेरि सोझ्यायो । प्वालमातेर्स्यासकेपछि उसले भित्र ठेल्न बल गर्यो । मलाई साह्रै दुख्योतर उसले मेरो शरीर थिचेर चल्नचरपटाउन दिएन ।
‘ऐया…बा..’ म कराएँ । चाकको प्वालमा उसको लाडोको टुप्पोमात्र पसेकोथियो । तर उसले त्यसभन्दा भित्र पनि ठेलेन र बाहिर पनि निकालेन ।मेरो चाकले उकुसमुकुस अनुभव गर्यो । अनि केही बेरमैउसले लाडो ठेल्न थालिहाल्यो । फेरि दुख्यो, पहिलाको भन्दा धेरैदुख्न थालेको थियो ।मलाई रिस पनि उठ्यो । तर के नै गर्न सक्थेँ र ? सहन सकुन्जेलसहेँ, अति दुखेपछि चित्कार निस्कियो, ‘मरेँ ममी.. ।’म कसैगरी पल्टिन सफल भएँ । ऊ मुसुमुसु हाँसिरहेकोथियो । जुरुक्क उठ्न खोजेँ ।
तर मेरा दुबै गोडा फट्याएर उसलेआपसमा छाती जोडिनेगरी मलाई काखमा राख्यो। मलाई आफूतिर जोडले तानिरहेको थियो । सोहीअवस्थामा मलाई खाटमा लडायो र ओठ चुस्न थाल्यो । चाकमा त्यत्रोदुखाएर लाडो हुल्न दिनुभन्दा मेरो लागि यो काम बरु सजिलो थियो । मैलेधेरै प्रतिवाद गरिनँ ।
मेरो मुख चुस्नुसम्म चुस्यो, ज्रि्रो तान्न सफलभएपछि खुब चुस्यो । म निसास्सिएँ । मेरा कपाल सुम्सुम्याउने, ओठ र चुस्ने, दूध माड्ने गरेर उसले झण्डै १० मिनेट बितायो ।उसका यस्ता हरकतले म पानीपानीभइसकेकी थिएँ । मेरो योनी रसाइसकेको थियो,शरीरमा सकसक भइरहेको थियो । अनौठोछट्पटी जाग्दै थियो ।
अनि मैले भने, ‘घर जान ढिलाभइसक्यो ।’उसले सोध्यो, ‘अब सुरु गरौं त ?’ मैले केही भनिनँ ।उसले मलाई लाडोतिर इशारा गर्दै भन्यो, ‘यसलाई एकचोटीम्वाई खाउ न त ।’ तुरन्तै मेरो मुखबाट निस्कियो, ‘नाइ..पर्दैन ।’
त्यसो भए हातले खेलाउ न त ।’
बरु त्यही ठिकलाग्यो र समाइदिएँ । निकै कडा हुँदो रहेछ । च्याप्पमुठीमा कसेँ । एक पटक त निमोठिदिउँजस्तो पनि लाग्यो ।केही बेरमा उसले मलाई उत्तानो पारेर सुतायो अनि आफ्नाकाँधमा मेरा खुट्टा फट्याएर चढायो । दाहिने हातले लाडोलाईपुतीको मुखमा राख्यो । मैले उसलाई भनेँ, ‘अस्ति लगाएको
जस्तो लगाउनु पर्दैन ? यत्तिकै नगर्नु, बच्चा बस्छ ।’ तर उसलेआफूसँग नभएकोले आज यत्तिकै गरौं भन्यो । डराउँदै मैले भनेँ,‘त्यसो भए त नाई ।’ ‘केही हुँदैन म माल बाहिरैझार्छु, भित्र झारे पो बच्चा बस्छ त ।’ उसले भन्यो । मैले उसलाईमनाउन प्रयास गरेँ तर सकिनँ । ‘सबै जिम्मा म लिउँला भएन र ?’उसले लाडो भित्र ठेल्दै भन्यो । मेरो शरीर रनक्क भयो ।उसले टुप्पोमात्रपसाएर केहीबेर तिघ्रा मुसार्यो । अनिघुँडा धसेर ऊ तयार भयो ।
बिस्तारै उ बल गर्न थाल्यो, सुरुसुरुमा उसलेधेरै भित्र पसाउने प्रयत्न नै गरेन । हल्का भित्र ठेल्ने र बाहिर
निकाल्ने गरिरहेको थियो । मेरा हात अचानक आफ्नो पुतीसुम्सुम्याउन पुगेछ । रसिलो भइसकेको पाएँ । उसले मेरा तिघ्राबेस्सरी कस्यो । अनि बल लगाउन थाल्यो । अब भने ऊपुरै जोशमा देखियो । एक पटक जोडले ठेल्यो । मलाई दुखेको अनुभवभयो । तर सहेर बसेँ । उसले ठेल्दै निकाल्दै गर्यो । अनिएक्कासी आफ्नो गति बढायो ।
भित्रसम्म धसाएरपेलिरहेको थियो । क्याच..क्याच आवाज निस्किरहेको थियो । चिल्लोबढेर केही सजिलो हुँदै थियो भने दुखाइ पनि कम भएकोमहसुस भयो ।ऊ दनादन आफ्नै तालमा पेल्दै गयो । अप्ठेरो भएर होला उसले मेरोशरीरमा आफ्नो शरीर बिसाएर पेल्न थाल्यो ।मरा खुट्टालाई उसका खुट्टाले फट्याइरहेको थियो ।
उसले आफ्नोशरीरको भार पुरै मेरो जिम्मामा छोड्यो र लगातार मच्चियो ।ऊ जति मच्चिदै जान्थ्यो, मलाई दुबै हातले उत्तिकै कस्दै गइरहेकोथियो । पेलाईको गति निकै बढ्यो । भित्र कताकता पोलेजस्तो भयो । तरम हल्लिन पनि नसक्ने गरी उसको अँगालोमाबाँधिएकी थिएँ । सामान्य छट्पटीबाहेक मकुनै प्रतिक्रिया जनाउन सकिरहेकी थिइनँ । ऊ थाक्नेपलको प्रतिक्षामा धैर्य गर्दै बसेँ । तर मेरो धैर्य टुट्दा पनि ऊथाकिरहेको थिएन । ‘भयो.. दुख्न थाल्यो…’ मैले भनेँ ।
उसले केही जवाफ दिएन । मेरो कुरा नसुनेझैंगरी उ मच्चिरहेकै थियो । बरु ऊ अझ जोडले पो मच्चिनथाल्यो । म पसिनाले निथ्रुक्कै भएँ । शरीर पनि निकैतात्यो । लाडो भित्र पस्दाकच्याक..कच्याक.. आवाज निस्किन्थ्यो ।ताली बजाएकोगतिमा ऊ मच्चिन थाल्यो ।छट्पटीले मेरो टाउको मडारिन थालेको थियो । मेरो आँखामाआँखा जुधाएर ऊ भने भएभरको बलले पेल्दै थियो। हुँदाहुँदै मेरोशरीर शिथिल भयो । त्यसको केही बेरमाबल्ल ऊ पनि शिथिल भएर ममाथि लम्पसार पर्यो । केहीबेरमा उसले भन्यो, ‘बाहिर झार्छ भनेको त सकिएन ।’ उसको कुरालेमलाई डर लाग्यो ।
सोधेँ, ‘के भयो ?’ उसले भन्यो, ‘माल भित्रै झर्यो।’ ‘ममी…’ म भयभीत भएँ । अनि रुनथालेँ । उसले मरो केश सुम्सुम्याउँदै भन्यो, ‘धन्दा नमान,केही पनि हुँदैन, बच्चा नबस्न पनि सक्छ, बस्यो भनेम छँदैछु ।’ केहीबेर पछि उसले मेरा स्तन फेरि माड्नथाल्यो । मैले भनेँ, ‘लु अब भयो, म जान्छु ।’उसले मलाई धम्क्याउन थाल्यो, ‘फेरि भोलि केही भयोभने मलाई नभन्नु नि ।’ म झन डराएँ । अब त उसको कुरा मान्नुमा नैमेरो भलाई थियो ।
र्यो । अनि लाडोलाई फेरि हुल्न थाल्यो । यो पटक पनिउही रफ्तारमा दनादन पेल्यो । मलाई अबपीडा हुन थालिसकेको थियो । ‘ऐया.. ऐया..’ भनेर भएपनि मैले उसलाई निकैबेर साथ दिएँ । मेरा शरीर कुनैप्रतिक्रिया नै जनाउन नसक्ने गरी थाकिसकेको थियो ।शिथिल भएर उसका प्रहारलाई सामना गर्नुबाहेक म सँग कुनैविकल्प नै थिएन । भत्भती पोल्न थाल्यो । तर पनिउसले छोडेन । मैले निकै बेर सहेपछि बल्ल ऊ शान्त भयो ।